Shina Led Screens Screen ho an'ny Rental Prs Series, Led Display Big Screen, Outdoor Advertising Led Led Screen Mpanamboatra
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Fampisehoana tariby fanofa-bary ,Làlam-pandeha fanofana, Fampisehoana Led Stage, Ny efijery nitarika ny sehatra,,
Home > Products > Fampisehoana LED manofa > Fampisehoana LED manofa
Ny vokatra avy amin'ny Fampisehoana LED manofa , mpanofana manokana avy any Shina, Fampisehoana tariby fanofa-bary , Làlam-pandeha fanofana mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Fampisehoana Led Stage R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Ho an'ny fampisehoana LED anatiny sy ivelany fivoahana dia vola ny fotoana. Priva nitarika andian-dahatsoratra PF Rental LED Display Screen tariby andiany misy 500mm * 500mm kabinetra ny hafainganam-pandehan'ny fananganana LED Display Screen . Miaraka amin'ny famolavolana kabinetra maimaim-poana, dia tsy...
Notarihin'i Priva dia midadasika amin'ny fampidirana ity andiany fanitsiana PF andiany fampiasa amin'ny Rental ity . Ity andian-dahatsoratra fakan- tsary Rental LED ity dia novolavolaina miaraka
PF Rental Led Display dia miaraka amin'ny haingam-pandeha avo lenta, fametrahana haingana, lanja maivana, lanja maivana, ny toetra mampiavaka azy dia: kabinetra alumina maty-cast tsy misy fanelingelenana sy lag, fa mora kokoa sy fampidirana fahitana tsara kokoa. Satria nifindra tamina toerana iray mankany...
Taorian'ny taona niforonan'ny sehatra fampirantiana LED, avo lenta kokoa ny famaritana ny «Screen Screen Stage», ny fironana amin'ny Priva Indoor Rental LED Display eo an-tsena amin'izao fotoana izao dia ny mamolavola miaraka amin'ny rafitry ny kabinetra mazava tsara ho an'ny kianja kely...
Andian-tsarimihetsika Priva PF Rental dia mampiseho ho an'ny fampisehoana an-tsehatra na fampisehoana hetsika izay mila fametrahana haingana sy manala. Karazana kabinetra iray no azo ampiasaina ho an'ny fisarihan'ny anatiny sy ivelany. Manana safidy amin'ny curve koa izy io. Fampahalalana avo lenta miaraka amin'ny haitao avo lenta miaraka amin'ny haitao avo lenta, ny tahan'ny fifanoherana avo lenta, ny fisondrotan-tsakafo mahafinaritra ary ireo endri-javatra rehetra ireo dia manome antoka ny efijery fitondra tsara sy tsara tarehy.
Miaraka amin'ny teknolojia encapsulation LED sy ny andalana famokarana SMT, ny fantsom- baravarankely LED piksel tampoka ivelany na famaritana avo dia mitarika fampisehoana ho an'ny fanofa trano . Ny fampisehoana LED sehatra dia natao ho an'ny sehatra na fampisehoana. Ankehitriny, fampisehoana sy hetsika bebe kokoa hatrany dia manana efijery LED fanofa hanehoana horonan-tsary na sehatra fiaviana. Noho ny fotoana tsy nampiasana azy, ny fampisehoana Stage LED dia angatahina ho mora mamory sy manafoana.
Fampisehoana Led Stage
Ny efijery nitarika ny sehatra